Khamaarka StakeLogic - CasinoAdvisor.eu
StakeLogic waa horumariye Dutch ah oo khadka tooska ah ku shaqeeya software, shirkadu intaas kamay soo wareegin. Soosaarahan ciyaartan waxaa la aasaasay sanadkii 2015. Sababtoo ah shirkaddu muddo dheer ma aysan sii jirin, kala duwanaanshaha fiidiyowyada fiidiyowga iyo mishiinnada mishiinka weli wali uma weyna sida loo tartamayo warshadaha qamaarka.
StakeLogic waxay la tartami kartaa horumariyeyaasha waaweyn ee cayaaraha warshadaha markay tahay tayada. Tani waa wax fudud sababtoo ah horumariye ciyaartan ka socota Nederland waxay abuureysaa muuqaal fiidiyoow muuqaal qurxoon oo muuqaal ah oo leh animations 3D iyo mawduucyo gebi ahaanba u gaar ah. Inta badan waxyaabaha la bixiyo ee 'StakeLogic' ayaa loogu talagalay qalab mobile. Awoodaha soo-saarehan cusub ee ciyaarta wuxuu isugu jiraa waaya-aragnimo iyo hami. StakeLogic dhab ahaantii waa qayb ka mid ah Greentube. Kani waa horumariyaha nidaamyada iGaming waana qeyb kamida shirkadda Novomatic. Waxaa loo aasaasay nooc cusub, shaqaalaha khibrada iyo kartida leh ee StakeLogic waxay horumariyaan ciyaaro casriyeysan oo casri ah oo loogu talagalay suuqa mobilada ee 3D iyo HTML5. Xafiiska weyn ee StakeLogic wuxuu ku yaal Nederland, magaalada Eindhoven.
StakeLogic wuxuu leeyahay xulasho ciyaar oo ah mashiinnada booska AWP ee caadiga ah iyo boosaska. AWP waa soo gaabinta Ingiriisiga ee Madadaalada oo leh Abaal-marinno. Ciyaarahaani dhammaantood waxaa loogu talagalay inay ku daydaan mashiinnada dhabta ee dhabta ah ee laga helo casinos-ka Dutch-ka ku saleysan iyo arcades. Kuwani boosaska classic raadinaya iyo boosaska yihiin wax sida caadiga ah 3-ambadeen, boosaska fudud boosaska. Badanaa waxay bixiyaan xoogaa muuqaalo ciyaar xiiso leh. Random Runner iyo Twin Joker, tusaale ahaan, waxay leeyihiin labalaab duuban, laba jeer oo madadaalo ah marka la barbar dhigo mashiinka caadiga ah ama mishiinka mishiinka. Tusaale ahaan, Ciyaarta 2000 waxay leedahay laba jibbaar oo 3 duntu, tiro calaamado firdhin ah iyo fursad dheeri ah oo abaalmarinno lacag ah! Kadibna waxaa jira Random 2 Wild. Dib-u-celintaas mashiinka miraha sidoo kale wuxuu leeyahay laba jibbaar oo leh 3 duntu iyo astaamaha miraha caadiga ah ee aakhirka iyo astaamaha Duurjoogta ah. Waxa kale oo jira marin dheeraad ah oo 4aad ah oo la heli karo, kaas oo lagu hawlgelinayo khamaarista qaarkood. Mashiinnada qadiimiga ah ee qadiimiga ahi runtii waxay leeyihiin soo jiidashadooda. Laakiin intaas oo dhan maahan StakeLogic inay bixiso. Waxa kale oo jira fiidiyoow fiidiyoow ah oo lagu ciyaaro 5 duntu. Ururinta cajiibka ah ee boosaska fiidiyowga waxaa loogu talagalay iyadoo loo eegayo heerka ugu dambeeyay.
Sidaas StakeLogic wuxuu leeyahay sawiro badan oo casri ah iyo muuqaalo ciyaar xiiso leh. Laakiin macnaheedu maahan wax badan oo horumariyaha ciyaarta ah haddii booqdayaasha khadka tooska ah ee khamaarka aysan sax ahayn maxaa yeelay liisanka casino ayaa maqan. Nasiib wanaagse, StakeLogic wuxuu leeyahay liisanka khaaska ah ee casino ee laga helo Awoodda Ciyaaraha ee Malta. Iyada oo ku saleysan jasiiradda Malta, hay'adani waa mid ka mid ah hay'adaha sharci-dejinta ugu caansan adduunka laguna kalsoon yahay. Waxay hubiyaan in soo-saaraha ciyaarta uu u hoggaansamayo sharciyada nabadgelyada iyo caddaaladda, laakiin sidoo kale waxay kormeerayaan ciyaar mas'uul ah. Kasiinada khadka tooska ah waxay si ammaan ah ula geli kartaa iskaashi shirkadda 'StakeLogic' si ay u soo bandhigto dalabyada ciyaarta ee ciyaartoyda khadka tooska ah u ciyaarta.
Waa wax la yaab leh in noocan oo kale ah ciyaartooy cusub oo horumariya sida StakeLogic uu isagu iska qaban karo laanta tartanka iGaming. Soo bandhigida ciyaarta ee soosaarahan ayaa horeyba looga heli karaa casinos-ka khadka tooska ah laga helo. Ku godadka fiidiyowga iyo mashiinada miraha ee shirkadan waa kuwo tayo sare leh. StakeLogic wax kama dhinna marka loo eego ciyaartoyda waa weyn ee suuqa. Kordhino badan oo khadka tooska ah ee internetka ah ayaa heshiis la galaya soo saaraha ciyaarta. Sidan ayay ku soo bandhigi karaan cinwaannada kala duwan ee khadka tooska ah ee internetka. StakeLogic waxaa laga yaabaa inuusan weli sameysan sumcad la mid ah qaar ka mid ah horumariyeyaasha kale ee ciyaarta. Laakiin shirkadda cusub ee ka socota Greentube iyo Novomatic waxay soo bandhigaysaa ururinta cajiibka ah ee fiidiyoowga fiidiyowyada iyo boosaska ay tahay inay ciyaartoydu iska hubiyaan. Iskudarka ugu weyn ee kulamada kala duwan ee StakeLogic ayaa ah inay maareeyaan isku dheelitirnaan wanaagsan oo udhaxeysa mashiinada casriga ah iyo boosaska fiidiyowga ee casriga ah, oo leh animations 3D iyo astaamo dheeri ah oo dheeri ah.
Soo hel muuqaalka guud ee casinos-ka khadka tooska ah ka shaqeeya ee StakeLogic la shaqeeya. Waxaad isku dayi kartaa tijaabiyaha barnaamijyadan horumarineed ee bilaashka ah bilaash. Ama si toos ah ugu ciyaar lacagta dhabta ah ugana faa'iideyso a deposit bonus. Waxaan horey u soo taxnay casinos ugu fiican aad loogu talagalay.
Kala sooc sida Software
Red Tiger Ciyaarta Casino
Bogga ugu weyn » Khamaarka StakeLogic